'अर्गानिक' कर्णालीको नास्ता अन्डा-चाउचाउ :: Setopati
कमलराज लम्साल जेठ २९
हुम्ला डायरी- ५
सुर्खेतमा अचेल 'सडक गाई' देखिँदैनन्। त्यहाँका गाई हुम्ला पठाइएको समाचार सुनिएको थियो। ७६ भदौमा नेपालगञ्जदेखि सुर्खेत हुँदै दैलेख लैजाने क्रममा कटकुवामा थुप्रै गाई भीरबाट खसालेर मारिएका थिए। पछि अदालतमा मुद्दा चल्यो। मुद्दा कसले जित्यो वा हार्‍यो, त्यो बेग्लै कुरा हो।
गत फागुनमा सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली उत्सवमा एउटा सत्र थियो 'प्रांगारिक प्रयास'। त्यसमा कर्णालीलाई कसरी प्रांगारिक कायम राख्न सकिन्छ भन्ने विषयकेन्द्रित बहस भयो। वक्ताहरूले रैथाने उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए। यस्ता उत्पादनमा 'भ्यालु एड' गरेर बजारीकरण गर्नुपर्ने कुरा गरे। प्रांगारिक उपादनलाई ब्रान्डिङ गरेर संसारभर बेच्न सकिने भन्दै प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसै अनुसार नीति र कानुन बनेका छन्।
कर्णालीमा खाद्यान्न अभावको खबर पनि बारम्बार सुनेकै हो। 'कर्णालीमा सबैखाले सम्भावना छन्' भन्ने पनि नसुनेको होइन। त्यसोभए कर्णाली भएर पनि केही नभएजस्तो किन देखिन्छ? कर्णालीको विकास कसरी सम्भव छ?
यस्ता यावत् प्रश्नको उत्तर खोज्न 'केही त गरौं' भनेर म जोडिएको ऋति फाउन्डेसनले हरेक वर्ष सुर्खेतमा कर्णाली उत्सव गर्छ। उत्सवले 'कर्णाली कमजोर होइन' भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्छ। कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन पहल गर्छ।
फर्किँदा बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा जानुकाजीसँग भेट भयो। उनले हामीलाई एक-एक मुठ्ठी भुटेको लट्टे दिइन्। भोक लागेकाले मिठो भयो। उनले मदनाबाटै हरियो तरकारी र ओखरको तेल पनि ल्याएकी रहिछन्। त्यो देख्दा हामीले 'रियल हुम्ला मिस गरेछौं' भन्ने भयो। जसै उनले बजारको पोका तेलसँग कोलमा पेलेको ओखरको तेल साटेको सुनाइन्, हरिवंश आचार्यको गीत याद आयो–हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसित पिठो पो साटिछन्!
गाउँपालिकामा धेरै समयदेखि रोजगार संयोजक पद खाली रहेछ। विज्ञापन भएर पनि छनौट हुन बाँकी। होस् पनि कसरी? छनौट समितिको संयोजक निजामति सेवाको वहालवाला वा सेवानिवृत्त उपसचिव हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 'हामी ताँजाकोट आउँदैछौं' भन्ने खबर पाउनासाथ कार्यपालिका बैठकले टिकाराम सरलाई संयोजकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको रहेछ।
हामी जसै ताँजाकोट छोड्यौं, टिकाराम सरको फोनमा तारान्तार घण्टी बज्न थाल्यो। रोजगार संयोजक छनौटको विषयलाई लिएर अनेक कुरा भए। कसैले 'किन सूचना नदिएको' भने। कसैले 'किन फलानोको नाम निकालेको' भने। टिकाराम सरले सबैलाई सरासर जवाफ दिए। बाँकी कुरा गाउँपालिकामा सोध्नु भने।
परीक्षार्थी सबै स्थानीय भएकाले परीक्षासम्बन्धी सूचना निवेदकको घरमै पुगेर दिइएको थियो। सफल हुने उम्मेदवारले यसअघि नेपाल बैंक लिमिटेडको लिखित परीक्षा पास गरेका रहेछन्। धेरैले 'पढाइमा राम्रै हो' भनेको सुनियो। उनले धेरै अंकले अरूलाई उछिनेको टिकाराम सरले सुनाए। छनौटको आधार लिखित परीक्षा मात्र थियो। त्यो पनि वस्तुगत प्रश्नोत्तर। फोनको कुराकानी सुनिरहेका शिवजीले पनि 'अब्बलले जागिर पायो त के अनौठो भयो' भने।
छनौट परीक्षामा त्यस्तो कुनै 'तलमाथि' भएको जस्तो मलाई पनि लागेको थिएन। संयोजकले न कुनै उम्मेदवार चिनेका थिए। न कसैसँग उनको कुनै स्वार्थ मिल्थ्यो। परीक्षाको अघिल्लो दिन प्रश्नपत्र शिलबन्दी गरेर बन्द गरेको दराजको चाबी उनी आफैंले बोकेका थिए।
त्यस रात हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कोठामा भुइँमै ओच्छ्यान लगाएर सुतेका थियौं। हिजोको धूले होटलको तुलनामा त्यो हामीलाई 'तीनतारे' थियो। टिकाराम सरसँगै भएकाले छनौट परीक्षालाई मैले पनि राम्रैसँग नियालेको थिएँ। छनौट समितिका तीनैजना ढकाल भएपछि मैले हाँसो गरेर भनेको थिएँ– यदि कुनै ढकाल नै पास भयो भने नि? संयोगवस ढकाल थरका एक जना दुई नम्बर वैकल्पिक परे।
हामी कुवाडी खोला तरेर बाजुराको हिमाली गाउँपालिका हुँदै अघि बढ्यौं। कर्णालीको किनारै किनार दाहिनेबाट हामी दक्षिण लागेका थियौं। कर्णाली करिडोरको केही खण्ड बाजुरामा पर्दो रहेछ। तिथिचौरमा रहेको नेपाली सेनाको पोष्टमा 'इन्ट्री' गरेर अघि बढ्यौं।
फेरि टिकाराम सरको फोन आयो। सुरूमा त कुराकानी राम्रै सुनिएको थियो। उताबाट 'अहिले कहाँ पुगिस्?' भनेपछि टिकाराम सर तात्तिए। भने– 'म जहाँ पुगे पनि के भयो? मैले रोजगार संयोजक छनौट समितिको संयोजकका नाताले जे गरेको छु, ठीक गरेको छु। सबै काम कानुनसम्मत् गरेको छु। के गर्ने हो गर्। तर मलाई पटक पटक फोन नगर्।'
बिहानदेखि केही खाइएको थिएन। धुलाचौरमा खाजा खाने सल्लाह थियो। कसैले फेरि फोन गरेर 'पख् कोल्टी त पुग्लास्' भनेपछि केही खान मन लागेन। कस्तो कस्तो भयो। अनि पानी खायौं। धुलाचौर काटेपछि बुढीनन्दा नगरपालिका लाग्यो। केहीबेरमा कोल्टी पुगियो।
बाटैमा कसैले सोध्यो, 'टिकाराम सर हो?'
हामीलाई बोकेको तारा एयर कर्णाली किनारै किनार दक्षिण लाग्यो। कालीकोटको खोंचमा जहाजलाई हावाले बेस्सरी हल्लाएपछि छेवैमा बसेकी एयर हेस्टेसलाई हेरेँ। उनी खिस्स हाँसेपछि 'व्यर्थै डराएछु' जस्तो लाग्यो।
बाजुराबाट हामी कालिकोट, दैलेख र सुर्खेतको आकाश हुँदै नेपालगञ्ज आइपुग्यौं। त्यहाँबाट गाडीमा सुर्खेत। बिहानदेखि केही नखाएका हामीले बबईमा दुई बजे 'दिउँसोको खाना' खायौं। त्यसपछि पेटले पनि शान्ति पायो।
यो पनि पढ्नुस्ः भाग १- मनले बाम गाउँभन्दा अगाडि पाइला चाल्नै मानेन
भाग ४- अनि हामी मास्क लाएर सुत्यौं...
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७८, ०९:०८:००